अब ओलम्पिकमा नेपाललाई पदक दिलाउने धाेकाे छ : प्रिन्स दाहाल (भिडियाे) | | Neplays.com
नेप्लेज, १ असाेज । नेपाली खेलकुदमा अझै पनि पूर्णकालिन खेलाडी बन्न निकै कठिन छ । खेलकुदका केहि विधाहरु अझै पनि ब्यवसायीक हुन सकेका छैनन् । त्यसमा ब्याटमिन्टन पनि पर्छ । खेलाडीलाई प्रतियोगिता खेलपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै‌ं पनि छैन । त्यसैले पनि खेलाडीहरु खेलका साथै विकल्पका रुपमा अरु पक्षमा पनि ध्यान दिन्छन ।
तर अहिले ब्याटमिन्टनका उदयीमान खेलाडी प्रिन्स दाहालका लागि भने अलि फरक अवस्था छ । उनका बुवा पनि खेलाडी भएको नाताले उनी ब्याटमिन्टनमा निकै मेहेनत गरिरहेका छन् । जसको नतिजा पनि उनले पाइरहेका छन् । दार्चुलाको खलंगामा जन्मिएका प्रिन्सले छोटो उमेरमा नै अन्तराष्ट्रिय रुपमा एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्तरको उमेर समूहमा नम्वर एक खेलाडी प्रिन्स यतिबेला अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा कमाइरहेका छन् । पछिल्लो पटक दुबई ओपन टेनिसको यू–१९ उमेर समूहमा स्वर्ण जितेका प्रिन्सले नेपालका लागि इतिहास बनाएका छन् ।
स्वभावमा लजालु र कम बोल्ने प्रिन्सका चाहना नेपाललाई ओलम्पिकमा पदक दिलाउनु रहेको छ । दुबई ओपनको उपाधि जितेपछि जुनियर बरियतामा पनि ठुलो छलाङ मारेका प्रिन्स ५४ औं स्थानमा पुगेका छन । यो प्रतियोगिता भन्दा अगाडी उनी एक सय तीन औं स्थानमा थिए । आफू भन्दा अनुभवी र अब्बल खेलाडीलाई पछाडी पार्दै दुई ओपन ब्याटमिन्टनको उपाधि जितेका प्रिन्ससँग नेप्लेजले गरेको भिडियो कुराकानी गरेकाे छ ।
दुवई यू–१९ जितेर आउनु भएको छ कत्तिको खुसी लागेको छ ?
नेपाललाई पहिलो पटक यू–१९ मेडल दिलाउन पाउँदा म एकदमै खुसी छु । मैले दुवईमा यू–१५ जितेकाले यस पटक यू–१९ जित्छु नै भनेर दुवई पुगेको थिए ।
मेडल जित्दा कस्तो लागेको थियो ?
म एकदमै खुसी भए । मैले नेपालका लागि यति ठूलो सफलता दिलाउन सकेकोमा खुसी भए । नेपालले यसअघि जहिल्यै भारतसँग हार्ने भएकाले यसपटक भारतलाई हराएर स्वर्ण पदक जित्छु भन्ने लक्ष्य लिएको थिए जसमा म सफल पनि भए ।
उच्च वरियतामा रहेका खेलाडीलाई पराजित गर्न कतिको चुनौती हुँदो रहिछ ?
भारतीय खेलाडीको प्रदर्शन राम्रो थियो । उसलाई धेरै बेर खेलाएर थकाएर जित्न सफल भए । उसँग खेल्दा गाह्रो भने एकदमै भएको थियो । यसभन्दा अगाडी भारतमा नेगेटिभ खेलेर हारेको कुराबाट सिक्दै पोजेटिभ खेलेर जिते । अहिले मैले जसलाई जितेको हुँ उसले मैले यू–१५ जित्दा यू–१९ जितिसकेको थियो । पहिला च्याम्पियन भएको खेलाडी अहिले सेकेण्ड भयो । उसको खेलका बेला ओभर कभिडेन्ट पनि देखियो । जसका कारण रेफ्रीसँग पहेलो कार्ड पनि पायो ।
तपाईका लागि दुवई लक्की हो ?
हो मेरा लागि दुवई लक्की नै छ । त्यहाँ मैले दुईवटा उपाधि जितिसके । प्रिन्स दाहाल भन्दा कस्तो भाइव आउँछ ? पोजेटिभ भाइभ आउँछ । मैले अब अरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु खेलेर टाइटल जित्नु पर्छ भन्ने नै आउँछ । मेरो लक्ष्य भनेको नेपाललाई ओलम्पिकमा पदक दिलाउने रहेको छ । त्यसकालागि मेहनत गर्नुपर्छ । साथै आसन्न १३ औं सागको तयारीका लागि क्याम्पमा छु । यसपटक नेपालमै हुने सागका लागि राम्रो तयारी गरेर भारतलाई पराजित गर्दै पदक जित्ने धोको छ ।